Mogadishu Journal » 2017 » December » 5
Mjournal :-Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa maanta Heshiis taariikhi ah la gashay Dowladda Mareykanka mudo 30 sano ah kadib. Heshiiskaan oo ku kacaya ku dhawaan $300 oo milyan oo Dollar, ayaa waxa wax looga qaban doonaa arimaha Caafimaadka, Waxbarasha iyo hormarinta...
Mjournal : -Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku guuleystay fulinta qorsheyaashii Lix biloodlaha ahaa ee ay higsaneysay muddadii koobnayd ee ay jirtay. Madaxweynaha oo khudbad ka...
Mjournal :-Wasiirka amniga Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Abuukar Islow ayaa faah faahin ka bixiyay xaaladda amaan ee Soomaaliya gaar ahaan amaanka magaalada oo maalmihii la soo dhaafay ay ka jirtay xaalad daganaan ah. Wasiirka Amniga Soomaaliya ayaa tilmaamay in ay meel...
Mjournal :-Waxaa magaalada Muqdisho maalintii Labaad ka soconaya wejigii 2-aad shirkii London ee arrimaha Soomaliya, kaasi oo ay ka qeyb galayaan madaxda dowladda Soomaaliya,kuwa dowlada Goboleedyada iyo saaxiibada beesha Caalamka,waxaana lagu wadaa in maanta la soo gaba gabeeyo...
Isku Aadka Tartanka maamul gobolleedyada oo la soo saaray
Mjournal :-Waxaa Muqdisho soo gaaray dhammaan maamul Goboleedyada sanadkan ciyaaraya tartankan markii labaad lagu qabanayo Muqdisho. Haddaba waxaa sanadkan ka qeyb galaya Lix Maamul Goboleed oo la isugu aadiyay Sidan Group A:Banaadir, Galmudug iyo Jubaland. Group B:Puntland,...
Maxkamada ciidamada Qalabka sida oo xukkunno kala duwan riday
Mjournal :-Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka oo Talaado ah xukunno isugu jira dil iyo xabsi ku ridday afar nin oo eedeynayaal ah, kuwaasoo Maxkamadda ku soo eedeysay inay Shabaab u qaabilsanaayeen qaraxyada Muqdisho. Guddoomiyaha Maxkamadda darajada koowaad ee...